Hanohana an-dRajoelina ny fikambanana Lafatra | NewsMada
Hanohana an-dRajoelina ny fikambanana Lafatra
Fikambanana hafa indray koa. Nanao fanambarana ny eo anivon’ny Lalana fampandrosoana ny tanindrazana (Lafatra) fa resy lahatra amin’ny kandidà Rajoelina, amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. “Niofana tany ivelany hahafahany mitondra vina hampandrosoana ny firenena ny filoha Rajoelina ary voarafitra ao amin’ny IEM izany. Vitany sy tanterany avokoa ny nampanantenainy. Mino izahay fa ho tahaka izany koa ny IEM sy ny fiaraha-miasany aminay manoloana ny traikefanay sy ireo fotodrafitrasa maro efa voaomanay”, hoy izy ireo tetsy Anosy, omaly. Nanterin’ny Lafatra fa kandidà manana vina sy fomba fijery amin’izy ireo ny mpanorina ny TGV.
Tsy azo atao tery vay manta ny fanorenana ifotony
Mihaino sy vonona hiara-kiasa ary koa mahafantatra ny olan’ny fiainam-bahoaka, araka ny fanambarana ihany. “Hanome aina vao amin’ny fanampiana sy fanohanana ny tantsaha hampiakarana ny harinkarenan’izy ireo”, hoy ihany ny Lafatra.
Momba ny raharaham-pirenena kosa, nohitsin’izy ireo fa tokony ho laharam-pahamehana ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy azo atao tery vay manta koa ny fanorenana ifotony. “Tokony ho vina hoentin’ny kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany”, hoy izy ireo.
Les indésirables du 26 Novembre 2020 26/11/2020